Sida Loo Helo Deeqaha -waxbarasho ee Kanada Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah 2022
Maqaalkani wuxuu siinayaa faahfaahin la taaban karo oo ku saabsan sida loo helo deeqaha waxbarasho ee Kanada labadaba ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah dhammaan heerarka waxbarasho. Raacitaanka tilmaamahan waxaad hubineysaa inaad baraneyso dhammaan waxa ku lug leh si loo helo labadaba qayb ahaan iyo si buuxda loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho ee Kanada.
Kanada waa xarun waxbarasho oo heer caalami ah iyo mid gudaha ah. Kama waabaneyso inay albaabadeeda u ballaariso inay aqbasho ardayda ka socota dhammaan jinsiyadaha si loogu amro jannadeeda heer caalami ee waxbarashada. Wadanka waxaa loo aqoonsan yahay adduunka mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto adduunka, sidaa darteed waxaad sameyn doontaa xulasho sax ah adoo qorsheynaya inaad shahaadada ka hesho Kanada.
1 Deeqda Waxbarashada Kanada
2 Sida Loo Helo Deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah
2.1 Ma fududahay in deeq waxbarasho laga helo Kanada?
2.2 Sideen ugu heli karaa deeq waxbarasho oo Kanada ah?
2.3 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Gudaha
2.3.1 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Dugsiga Hoose dhigata
2.3.2 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanadiyaanka ah ee Ardayda Masters-ka ee Guryaha
2.3.3 Shuruudaha deeqda waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda PhD-da ee Gudaha
2.4 Shuruudaha deeqda waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
2.4.1 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadeed
2.4.2 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Masters-ka Caalamiga ah
2.4.3 Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah ee PhD
3 Deeqaha Kanada ee Ardayda Gudaha
3.1 Imtixaanka deeqda waxbarasho ee Canada (CGS)
3.2 Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS)
3.3 Banting Shahaadooyinka Dugsi-Dheeraadka ah
3.4 Sayniska Dabiiciga ah iyo Abaalmarinta Shahaadada Injineernimada
3.5 L. Holmes Abaalmarinta Daraasaadka Dhakhtarka Kadib
3.6 Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Dick Martin
3.7 Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeq waxbarasho
4 Deeqaha Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
4.1 Jaamacadda Winnipeg deeqda waxbarasho ee Hogaamiyaasha Caalamka
4.2 Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeq waxbarasho
4.3 Barnaamijka Aqoonyahanada Aasaaska Mastercard
4.4 Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS)
4.5 The Lester B. Pearson Deeqda Caalamiga ah
4.6 Karen McKellin Hogaamiyaha Caalamiga ee Abaalmarinta Berri
4.7 Donald A. Wehrung Award Student Student
4.8 Abaalmarinta Hogaamiyaha Caalamiga ee Berito ee Jaamacadda York
4.9 Jaamacadda Winnipeg deeqda waxbarasho ee Hogaamiyaasha Caalamka
4.10 Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeq waxbarasho
4.11 Barnaamijka Aqoonyahanada Aasaaska Mastercard
4.12 Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS)
4.13 The Lester B. Pearson Deeqda Caalamiga ah
4.14 Karen McKellin Hogaamiyaha Caalamiga ee Abaalmarinta Berri
4.15 Donald A. Wehrung Award Student Student
4.16 Abaalmarinta Hogaamiyaha Caalamiga ee Berito ee Jaamacadda York
4.18 Talo soo jeedin
Deeqda Waxbarashada Kanada
Marka laga soo tago bixinta waxbarasho heer sare ah, Kanada waxaa lagu yaqaanay deeqo waxbarasho oo deeqsinimo ah oo la siiyo labadeeda arday ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee ku kala jira waxbarashooyin kala duwan, shahaadada koowaad, masters-ka iyo Ph.D.
Si kastaba ha noqotee, deeqaha waxbarasho ayaa mararka qaarkood u imaan kara kuwo si buuxda loo maalgeliyo ama qayb ahaan la maalgeliyo iyada oo ku xidhan jidhka, aasaaska ama ururku bixiyo deeqda waxbarasho. Si kastaba ha noqotee, dhammaan deeqahaani waxay taageeraan maalgelinta ardayda ee waxbarashada.
La soco qodobkan si aad u barato sida saxda ah ee lagu helo deeqaha waxbarasho ee Kanada iyo shuruudaha lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo helo deeqdan waxbarasho.
Nidaamka lagu dalbanayo deeqaha waxbarasho ee Kanada wuxuu noqon karaa mid hawl badan oo culeys badan leh waana sababta aan u baarnay waqti dheer oo adag inaan kugu fududeyno culeyska adiga adoo isku keenaya maqaalkan si ardayda xiisaha leh ee ujeedadoodu tahay inay wax ku bartaan Kanada iyada oo loo marayo deeq waxbarasho ay heli karaan dhammaan macluumaadka dhammaan ugu wada baahan hal meel.
Dhammaan macluumaadka aad ugu baahan karto shahaadada koowaad, masters-ka, PhD, arday caalami ah ama kuwa gudaha ah oo ku saabsan sida loo helo deeq waxbarasho Kanada ayaa dhammaantood lagu sharraxay tallaabo tallaabo qodobkan, markaa dib u fadhiiso oo si fiican u akhri.
Su'aalaha qaarkood waxay ku qasban yihiin inay ku dhibaateeyaan markay tahay helitaanka deeq waxbarasho ee Kanada sida sida qofku u heli karo deeq waxbarasho oo buuxda Kanada iyo sida hawshu ugu jirto inuu mid helo. Waxaan jawaabo toos ah ka bixin doonaa dhowr ka mid ah su'aalahan ka dibna waxaan ku sii wadi doonaa mawduuca ugu muhiimsan.
Haa, way u fududahay ardayda gudaha laakiin maaha sidan oo kale ardayda caalamiga ah maadaama aysan jirin deeqo badan oo loo qoondeeyay ardayda caalamiga ah marka la barbardhigo tan ardayda gudaha.
Si loo ogaado, inta badan deeqaha waxbarasho ee Kanada waxay u furan yihiin ardayda la aqbalay oo keliya. Ku dhowaad jaamacad kasta oo ku taal Kanada waxay leedahay barnaamijyo deeq waxbarasho oo gaar ah ardayda caalamiga ah, laakiin heshiisku waa inay tahay inay heleen helitaanka jaamacadda marka hore si ay ugu qalmaan iyaga.
Helitaanka deeq waxbarasho oo buuxda Kanada waa suurtagal laakiin waxay inta badan kuxirantahay adiga iyo go'aankaaga inaad mid hesho. Waxaan ula jeedaa, waa inaad feejignaataa waxyaalahan, u orod raadinta ugu badan ee suurtogalka ah oo aad aqriso qodobbada kan oo kale ah.
Waxaa jira wax aad u baahan tahay inaad ka fahanto ku guuleysiga deeqaha waxbarasho, u qalmiddu kuma filna. Tani waa run run ah oo daacad ah.
Waxaa jira dad badan oo aqoon leh oo halkaas jooga oo aan kasban doonin wax deeq waxbarasho ah maxaa yeelay waxay fadhiyaan guryahooda iyagoo sugaya deeqo waxbarasho inay u yimaadaan oo ay salaamaan halka ay tahay inay fiiriyaan fursadaha jira.
Ku adkaysi raadintaada deeqaha waxbarasho, haka waaban inaad dalbato fursad kasta oo jirta oo waligaa ha quusan maxaa yeelay waxaad codsatay fursado dhowr ah oo midna laguma xulin.
Sidoo kale waa inaad noqotaa arday caqli badan, mid leh waxqabad tacliimeed heer sare ah isla markaana aad ku soo kordhisay xoogaa tabaruc waxbarasho, cilmi baaris ama adeeg la xiriira si aad u dhisto CV-gaaga, gaar ahaan ardayga PhD ee doonaya deeqda waxbarasho.
Deeqaha waxbarasho badanaa waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan waxyaabahan sidaas darteed waa muhiim inaad u qalanto sidii arday aad ufiican labadaba tacliinta, guulaha, dhaqanka wanaagsan iyo kaqeybgalka arrimaha manhajka dheeraadka ah.
Uma muuqan karaan wax badan laakiin deeqaha waxbarasho badankood waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu saleynayo aqoontaas. Sidoo kale, kala hadal dadka kale sida asxaabta, xubnaha qoyska, bulshada, macallimiinta / macallimiinta, iwm, oo ku saabsan raadintaada deeqda waxbarasho ee Kanada, waa nooc kale oo cilmi baaris ah. Ma ogaan kartid, laakiin tani waxay ku shaqaysaa sixir!
Haddii ay tahay hay'addaada martigelinta ee bixisa deeqda waxbarasho, la xiriir iyaga si aad u ogaato shuruudaha lagama maarmaanka ah iyo sida loo dalbado deeqda waxbarasho, had iyo jeer codso deeqahaaga waxbarasho goor hore oo dalbo wax ka badan hal fursad, codso inta ugu badan ee aad heli karto u qalmo; waxay kuu dheereyneysaa nasiibkaaga.
Ardayda caalamiga ah, u diyaarso baasaboorkaaga caalamiga ah / tan qaranka si aad u diyaar garowdo oo aad u socoto isticmaalka. U diyaargarow dhammaan shuruudaha looga baahan yahay inaad wax ku barato dibedda marka markay fursad soo gasho, kuma dhex mari doonaan farahaaga diyaargarow la'aan. Waxaad ka heli kartaa dhammaan aasaasiga halkan ku baro shuruudaha dibadda.
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Gudaha
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Dugsiga Hoose dhigata
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha looga baahan yahay ardayga reer Kanada ee dhigta shahaadada koowaad ee jaamacadeed inuu u codsado deeq waxbarasho jaamacad Kanada ku taal;
Codsadeyaashu waa inay kaqeybqaataan ama ay kujiraan sanadkoodii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ee Kanada waxayna rabaan inay wax ka bartaan jaamacad la aqoonsan yahay oo ku taal Kanada ama waa inay horeyba u dhigteen barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Codsaduhu waa inuu haystaa kaarka aqoonsiga ardayga oo sax ah ama sarkaal kale oo qaab aqoonsi ah.
Codsaduhu waa inuu uqalmaa deeqaha waxbarasho ee uu isagu ama iyadu doonayo inuu codsado.
Hore u codso oo buuxi foomka dalabkaaga deeqda ah faahfaahinta saxda ah oo soo gudbi waqti dheer ka hor waqtiga kama dambaysta ah.
Qoraallada waxbarashadda ee codsadaha ayaa loo baahan doonaa sidaa darteed waxaad fursad u heli kartaa inaad u-qalanto deeqo waxbarasho oo ku saleysan qiimeyn taas oo lagu bixiyo iyadoo lagu saleynayo waxqabadkiisii ​​hore ee ardayga, maadaama deeqaha noocan oo kale ah aan loo baahnayn in la dalbado.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo fara badan oo ardayda gudaha ee reer Kanada codsan karaan oo ay leeyihiin shuruudo kala duwan, raac shuruudaha deeq kasta oo waxbarasho si sax ah.
Waxaad dalban kartaa qaar ka mid ah deeqo waxbarasho oo ay bixiso dawladda Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanadiyaanka ah ee Ardayda Masters-ka ee Guryaha
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha ardayga dugsiga sare ee sayniska u baahan doono inuu dalbado deeq waxbarasho oo Canadian ah;
Codsaduhu waa inuu dhammaystiray 3 illaa 4-sano ama in ka badan barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacad la aqoonsan yahay oo ku taal Kanada ama dibedda.
Si aad u codsato, codsadayaashu waa inay codsadaan waqti-buuxa ama waqti-dhiman (sida ay codsatay hay'adda deeqaha waxbarasho) barnaamijka shahaadada masters-ka ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay ayna heleen dalab gelitaan.
Soo gudbi arjiga deeqda waxbarasho goor hore oo si sax ah u raac tilmaamaha.
Inta badan barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee Canadian-ka waxay ardayda ku abaalmariyaan hadba sida ay u kala mudan yihiin (waxqabadka tacliimeed, ka-qaybgalka howlaha manhajka dheeriga ah iyo ka-qaybgalka wanaagsan) ama baahida ku saleysan (ee la siiyo ardayda leh caqabado dhaqaale). Marka ka hor intaadan dalban deeqda waxbarasho ee masters-ka waa inaad hubsataa inaad ku dhacayso mid ka mid ah qaybahan haddii shuruudaha deeq-lacageedku si kale u sheegaan mooyee.
Hoos waxaa ku yaal dukumiintiyo dheeri ah oo loo baahan karo iyada oo qayb ka ah nidaamka dalabka deeqaha waxbarasho;
Warqad talo bixin ah; taas oo laga heli karo macallimiintii hore, macallimiinta dugsiga sare ama loo shaqeeyaha (ikhtiyaar)
Qoraallada tacliinta ama dibloomada waxbarashadii hore (shahaadada koowaad)
Muuji baahi dhaqaale (inta badan soo bandhig rasmi ah oo dakhliga sanadlaha ee qoyska)
Dukumiintiyadan kor ku xusan ayaa laga yaabaa ama looma baahna, waxay kuxirantahay hay'ad deeq waxbarasho oo ku lug leh. Fursad kasta oo deeq waxbarasho ah oo la daabacay badanaa waxay la socotaa dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka ee fursaddaas gaarka ah, shuruudaha dalabka iyo habka.
Shuruudaha deeqda waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda PhD-da ee Gudaha
Hoos waxaa ku qoran shuruudaha laga rabo ardayga PhD ee gudaha ah inuu raaco si uu u codsado deeqda waxbarasho ee Kanada;
Musharaxa waa inuu marka hore codsadaa oo lagu qoraa barnaamijka PhD ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Waa inuu dhammaystiray barnaamijka shahaadada koowaad iyo koowaad ee masters degree.
Musharaxa waa inuu lahaadaa ugu yaraan laba ama in ka badan oo khibrad shaqo ah oo caddayn ah.
Codsadeyaasha muujiya waxqabad tacliimeed oo heer sare ah iyo wax ku biirinta barashadooda inta badan waa la xushay.
Codso deeqaha kale ee dibedda ee PhD oo raac tilmaamaha iyo shuruudaha si sax ah.
Dukumiintiyada soo socda ayaa loo baahan karaa ama sida ku xusan hay'adda deeqaha waxbarasho;
Qoraallada tacliinta ee dugsigii hore
Waa muhiim ardaydu inay sameeyaan cilmi baaris dheeraad ah si ay wax badan uga ogaadaan dukumiintiyada loo baahan yahay iyo shuruudaha kale maadaama barnaamijyada deeqaha waxbarasho ay ka duwan yihiin oo ay leeyihiin shuruudo kala duwan sidoo kale.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee PhD ee Kanada si aad u eegto
Trudeau Foundation deeqaha waxbarasho ee Kanada
Sidoo kale, waa kan maqaal macluumaad ah oo aan si gaar ah ugu qornay sida loogu guuleysto deeqaha waxbarasho ee PhD-da Kanada.
Shuruudaha deeqda waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadeed
Liistada soo socota ayaa ah shuruudaha looga baahan yahay ardayda caalamiga ah ee shahaadada sare ee codsanaya deeqda waxbarasho ee Kanada;
Codsaduhu waa inuu dalbadaa oo la siiyaa ogolaansho ama wuxuu dalban doonaa gelitaanka barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda Kanada ama kuleejka.
Ku bilaw arjigaaga goor hore una hogaansanaw waqtiyada kama dambaysta ah.
Qaar ka mid ah barnaamijka deeqaha waxbarasho ayaa u baahan kara codsadayaasha caalamiga ah inay soo gudbiyaan maqaal ama ka codsadaan tixraac macallimiintii hore, u diyaari labadaba haddii ay dhacdo.
Codso deeqaha waxbarasho ee dibadda ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah una hoggaansanaanta tilmaamaha iyo shuruudaha.
Hayso qoraalkaaga aqooneed gacantaada.
Baasaboor ama qaab kale oo aqoonsi oo asal ah
Taariikh nololeedka Manhajka ama Resume
Dhibcaha imtixaanka jaango'an (IELTS / TOEFL)
Hesho ruqsad waxbarasho oo ansax ah oo kuugu adeegi doonta Kanada illaa dhamaadka waxbarashadaada dibadda.
Deeqaha waxaa lagu bixin karaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka tacliimeed ee codsadaha, ka-qaybgalka manhajka ka baxsan, xirfadaha kale ee hal-abuurka ah ama baahiyaha dhaqaale markaa hubi inaad ku dhacdo mid ka mid ah kuwan ka hor intaadan dalban laakiin deeqaha waxbarasho qaarkood ma isticmaalaan mid ka mid ah laakiin taas beddelkeeda waxay abuureysaa mid gaar ah, sidaas darteed, cilmi-baaris dheeraad ah waa muhiim.
Bixi dukumiintiyada arjiga ee deeqda waxbarasho ee lagama maarmaanka ah halkan ayaa ah meesha aad kala xiriirto hay'adda martigelinta ama barnaamijka deeqda waxbarasho si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah ee laga heli karo Kanada si loo eego.
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Masters-ka Caalamiga ah
Kuwa soo socda ayaa ah shuruudaha loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee masters-ka ee codsanaya deeqda waxbarasho ee Kanada;
Waa inuu dhammaystiray barnaamijka shahaadada koowaad ee machad la aqoonsan yahay.
Codsaduhu waa inuu ka diiwaangashan yahay, uu codsaday ama dhakhso u codsan doonaa gelitaanka barnaamij shahaadada masters-ka ah oo buuxa ama waqti-dhiman ah oo la aqoonsan yahay oo laga helo hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Ku bilow arjiga deeqda waxbarasho ee hore
La kulan shuruudaha qiimeynta barnaamijka deeqda waxbarasho oo noqon kara hoggaamin, karti cilmi baaris iyo heer sare ee tacliimeed ama haddii kale sida lagu sheegay barnaamijka.
Hayso ruqsad waxbarasho oo sax ah oo Kanadiyaan ah.
Waad dalban kartaa inta ugu badan ee deeqda waxbarasho ee Canadian-ka ah intii aad kari karto oo aad u hoggaansami karto xeerarka, shuruudaha iyo waqtiga kama dambaysta ah.
Dukumiintiyada soo socda waa inay ku jiraan gacantaada maxaa yeelay waa loo baahan karaa;
Baasaboor caalami ah oo ansax ah
Qoraallada tacliinta ee dugsigii hore.
La xiriir hay'adda martigelinta ama hay'adda deeqda waxbarasho si aad wax badan uga barato dukumiintiyada loo baahan yahay wixii fursad waxbarasho ah ee la daabaco.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee laga heli karo Kanada si loo eego.
Shuruudaha Deeqda-waxbarasho ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah ee PhD
Kuwa soo socdaa waa shuruudaha loogu talagalay ardayda 'PhD' ee caalamiga ah ee codsanaya deeqda waxbarasho ee Kanada;
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​ogolaansho waxbarasho oo ansax ah
Horaanba u qirtay ama damacsanaa in aan ku raadsado barnaamij waqti buuxa ama waqti dhiman ah oo PhD ah jaamacad ama jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Codsaduhu waa inuu lahaadaa karti cilmi baaris oo gaar ah oo ay weheliso rikoodh tacliimeed oo heer sare ah ama uu la kulmo shuruudaha qiimaynta ee ay dejisay hay'adda deeqda waxbarasho.
Codso deeqaha waxbarasho ee dibadda oo aad la kulanto waqtigooda ugu dambeeya iyo shuruudaha kale
Khibrad shaqo iyo caddayn sidoo kale
Qoraallada tacliinta ama diblooma
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee PhD ee Kanada si loo eego.
Deeqaha Kanada ee Ardayda Gudaha
Hoos waxaan ku taxay tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho ee maxaliga ah ee laga heli karo Kanada ee loogu talagalay ardayda guryaha ku jirta oo ay weheliyaan xiriiriyeyaasha codsigooda iyo sida loo helo.
Ardayda gudaha ama muwaadiniinta Kanada waxay dalban karaan deeqo waxbarasho oo laga yaabo inay ka yimaadaan dowladda Kanada ama aasaaska hay'adaha samafalka ee Kanada.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan ee Canadian-ka gudaha, masters-ka iyo ardayda PhD ay dalban karaan oo ay ku jiraan shuruudaha iyo shuruudaha u-qalmitaanka ee looga baahan yahay inay u qalmaan barnaamijyada deeq-lacageedka.
Imtixaanka deeqda waxbarasho ee Canada (CGS)
Sayniska Dabiiciga ah iyo Abaalmarinta Shahaadada Injineernimada
L. Holmes Abaalmarinta Daraasaadka Dhakhtarka Kadib
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Dick Martin
Pierre Elliot Trudeau Foundation Deeq waxbarasho
Tani waa barnaamij deeq waxbarasho sanadle ah oo u qalma $ 17,000 la siiyay ardayda ka qalin jabisay masters ama heerarka dhakhaatiirta daraasadda. The Canadian Graduate Scholarship waxaa la siiyaa ardayda qalin jabisa ee muujiya heerka sare ee guusha ee shahaadada koowaad iyo hore ee qalinjabinta iyo heer sare oo cilmi baaris ah.
Barnaamijka CGS waxaa si wada jir ah u bixiya saddexda hay'adood ee federaalka ah ee Kanada: CIHR, NSERC iyo SSHRC oo taageeraya ilaa 3,000 arday sannad kasta dhammaan qeybaha kala duwan ee waxbarista si aqoonyahannada la siiyay ay xoogga saaraan daraasaddooda cilmi-baarista ee waqtiga-buuxa ah.
Si aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa inay dhammaystiraan barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad iyadoo la doorbidayo maamuusyada heerka koowaad oo lagu qoro ama, la dalbado, ama waxay codsan doonaan gelitaan waqti-buuxa ah oo loogu talagalay barnaamijka qalin-jabinta ee heerka mastarka ama heerka takhasuska daraasadda ee la aqoonsan yahay Hay'ad Canadian ah.
Waxay umuuqataa inaysan aheyn dhamaan iskuulada Kanadiyaanka uqalma deeqdan waxbarasho, waa inaad laxariirtaa hay'ada aad martida u tahay barnaamijka CGS si aad u ogaato hadii iskuulku bixiyo deeqda waxbarasho, hadii ay bixiyaan, wax ka bartaan shuruudaha gudaha iyo nidaamka dalabka hay'adaada. waxay ubaahan karaan sidoo kale ixtiraamaan waqtiga kama dambeysta ah ee gudaha sidoo kale.
Tani waa inay noqotaa barnaamijka ugu caansan uguna deeqda badan deeqda waxbarasho ee Kanada, waxay u furan tahay codsi loogu talagalay ardayda gudaha waxayna ka caawisaa hay'adaha Canadian-ka inay soo jiitaan ardayda takhasuska sare leh ee muujiya heerka sare ee tacliinta, kartida cilmi baarista iyo hoggaaminta.
Vanier CGS waxaa lagu qiimeeyaa $ 50,000 sanadkiiba seddex sano inta lagu gudajiro barashada dhaqtarnimada codsadayaashana waxaa badanaa soo magacaaba machadkooda martida loo yahay kadib markay qasab ku tahay inay soo gudbiyaan codsi muujinaya xiisaha ay u qabaan Vanier CGS.
Deeqdan ayaa la bixiyaa iyada oo ku saleysan saddexda qaybood ee cilmi baarista oo kala ah;
Cilmiga bulshada iyo cilmi baarista aadminimada.
Codsadeyaashu waa inay ku dhacaan mid ka mid ah anshaxyada cilmi baarista ee kor ku xusan si ay ugu qalmaan deeqda waxbarasho.
Barnaamijka 'Banting Postdoctoral Fellowships' wuxuu siiyaa maalgelin codsadayaasha ugu dambeeya ee dhakhaatiirta si ay uga qayb qaataan kobaca dhaqaalaha, bulshada iyo cilmi baarista ku saleysan dalka. Iskuduwaha ayaa lasiiyaa sanadkiiba ardayda 70, oo lagu qiimeeyo $ 70,000 sanadkiiba oo aan dib loo cusboonaysiin karin laba sano kadib.
Si aad xaq ugu yeelatid, codsadayaashu waa inay dhameystireen dhammaan sharuudaha looga baahan yahay shahaadada PhD-ga oo ay leeyihiin waxqabad tacliimeed oo aad u sarreeya, xirfadaha hoggaaminta iyo kartida cilmi baarista. Sidoo kale, waa inuu dalbaday ogolaansho ama horeyba uga diiwaangashan yahay barnaamijka PhD ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Kahor intaadan bilaabin Codsiga Shahaadada Bonding Postdoctoral oo ah arday haminaya PhD, la xiriir hay'adda aad rabto inaad codsato gelitaanka oo xaqiijiso inay uqalanto martigelinta Banting Fellow.
Golaha Cilmi-baarista Sayniska Dabiiciga ah iyo Cilmi-baarista injineernimada ee Kanada wuxuu siiyaa abaalmarinno taxane ah ardayda qalin-jabinta gudaha ah si loogu dhiirrigeliyo inay is-diiwaangeliyaan wax badan oo ka mid ah sayniska dabiiciga ah iyo barnaamijyada injineernimada. Kaliya ardayda dhigata shahaadada koowaad ee iska diiwaangeliya qaybta sare ee daraasadda ayaa xaq u leh abaalmarinta deeqdan waxbarasho.
Iyada oo ilaa qiimo lacageed oo ah $ 100,000 CDN sanadkiiba oo dabooli kara hal ama laba sano oo ah daraasadaha cilmi-baarayaasha, abaalmarinta waxaa la siiyaa musharrixiinta leh awooda cilmi baarista ee kimistariga, fiisigiska, bayoolajiga ama xisaabta maadaama ay la xiriiraan geedi socodka caafimaadka iyo bayoolojiga.
Si aad ugu qalanto, murashaxu waa inuu noqdaa muwaadin Canadian ah ama arday gudaha ah oo uu ka qalinjabiyey jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay isla markaana haysto shahaado dhakhtar sidoo kale.
Deeqdani waxay u dhigantaa $ 30,000 oo sanadle ah ayaa la siiyaa ardayda gudaha ama muwaadiniinta reer Kanada ee ka diiwaangashan waqti-buuxa ama waqti-dhiman, koorsada caafimaadka shaqada iyo amniga la xiriirta iyo barnaamijka u horseedaya shahaadada shaqada ama caafimaadka iyo amniga.
Si aad u dalbato, codsadayaashu waa inay qoraan sheeko 1,000 - 1,200-erey, warqad dabool ah oo ay buuxiyaan foomka dalabka tooska ah. Qiimeynta waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu saleynayo dhammaan xirmada arjiga oo ah codsi, warqad iyo qoraal.
Deeqdan waxaa la siiyaa sanad walba codsadayaasha horeyba loo siiyay gelitaanka ama sanadka koowaad, laba, ama seddex ka mid ah barnaamijka dhaqtarka buuxa ee jaamacadda Kanada oo la aqoonsan yahay. Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsadeyaasha shaqadooda takhasuska waa inay la xiriiraan mid ka mid ah kuwan soo socda;
Kanada iyo adduunka
Dadka iyo deegaankooda dabiiciga ah
Marka lagu daro waxyaabaha kor ku xusan, codsadayaasha waxaa sidoo kale lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo heer sare ee tacliimeed, ka qeyb qaadashada bulshada, xirfadaha hogaaminta iyo xirfadaha isgaarsiinta. La xiriir hay'adda martida loo yahay si aad u ogaato haddii ay xaq u leedahay deeqda waxbarasho ee 'Pierre Elliot Trudeau Foundation', iyo haddii aad u-qalanto inaad ordo waa inaad ka dalbataa habka xulashada gudaha ee jaamacaddaada adoo adeegsanaya bogga aasaasiga ah.
Xagga sare waa deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda gudaha ama muwaadiniinta Kanada oo leh faahfaahinta lagama maarmaanka ah. Deeqaha shahaadada koowaad ee jaamacadeed waxaa inta badan gudaha ka bixiya jaamacadaha martida loo yahay oo ku saleysan mudnaanta, ardaydu xitaa ma ogaan doonaan in dib loogu eegayo deeqda waxbarasho laakiin si kastaba ha noqotee, had iyo jeer la xiriir hay'addaada martida loo yahay si aad wax uga barato deeq kasta oo waxbarasho oo aad dalban karto heerka qalin-jabinta.
Deeqaha Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Ardayda caalamiga ah sidoo kale waxay heli karaan deeqo waxbarasho oo Kanada ah, hoosta waxaa ku yaal barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee dhammaan heerarka waxbarasho ay dalban karaan.
Jaamacadda Winnipeg deeqda waxbarasho ee Hogaamiyaasha Caalamka
Barnaamijka Aqoonyahanada Aasaaska Mastercard
The Lester B. Pearson Deeqda Caalamiga ah
Karen McKellin Hogaamiyaha Caalamiga ee Abaalmarinta Berri
Donald A. Wehrung Award Student Student
Abaalmarinta Hogaamiyaha Caalamiga ee Berito ee Jaamacadda York
Deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa 53 ardayda shahaadada koowaad ee caalamiga ah iyo kuwa qalin jabiya ee galaya mid ka mid ah barnaamijka jaamacadda markii ugu horreysay. Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho, codsaduhu waa inuu noqdaa arday caalami ah oo galaya sanadka ugu horeeya ee barnaamij kasta heer kasta oo daraasad ah waana inuu lahaadaa ugu yaraan 80% celcelis gelitaan ama u dhigma sidoo kale leh xirfado hoggaamineed.
Gudbinta shuruudaha kor ku xusan iyo gudbinta foomka dalabka deeqda waxbarasho oo dhameystiran, mid 250 - 500-ereybixin shaqsiyeed ah, cashar manhaj iyo labo tixraac oo muujinaya waxqabadyadaada manhajka dheeraadka ah ama tabaruce ee Jaamacadda Winnipeg kahor waqtiga kama-dambaysta ah.
Barnaamijkani wuxuu siiyaa taageero dhaqaale, bulsho iyo aqoonyahanno aqoonyahanno ay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn ujrooyinka waxbarashada, hoyga, buugaagta iyo agabyada kale ee waxbarasho. Barnaamijka aqoonyahanku wuxuu u furan yahay codsi loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee shahaadada koowaad iyo heerka sare ee daraasadda.
Si aad ugu qalanto, musharrixiinta shahaadada koowaad waa inaysan ka badnaan 29 sano laakiin way ka hoosayn karaan waqtiga arjiga halka sayidka, musharraxa waa inuusan ka badnaan 35 sano laakiin wuu ka hoosayn karaa waqtiga codsiga.
Barnaamijka `` Mastercard foundation '' aqoonyahannada aasaasiga ah waxaa lagu fuliyaa iyada oo loo marayo jaamacadaha iskaashiga la leh adduunka oo dhan mid kasta oo leh shuruudaha u-qalmitaanka ee kala duwan iyo waqtiga kama dambaysta ah, laakiin jaamacadaha bixiya barnaamijka aqoonyahannada ee Kanada waa Jaamacadda McGill iyo Jaamacadda British Columbia.
Tani waa inay noqotaa barnaamijka deeqda waxbarasho ee ugu caansan uguna deeqda badan Kanada, waxay u furan tahay codsi loogu talagalay ardayda caalamiga ah waxayna ka caawisaa hay'adaha Kanada inay soo jiitaan ardayda takhasuska sare leh ee muujiya heerka sare ee tacliinta, kartida cilmi baarista iyo hoggaaminta adduunka oo idil.
Deeqdani waxay ku habboon tahay oo keliya ardayda caalamiga ah ee ujeedkoodu yahay inay iska diiwaangeliyaan barnaamijka shahaadada koowaad ee Jaamacadda Toronto waxayna sameeyeen guulo waxbarasho oo aad u sarreeya, waxay muujiyeen hal-abuur waxayna leeyihiin xirfado hoggaamineed.
Deeqda ayaa la siiyaa sanad walba ardayda 37 waxayna daboolaysaa khidmadaha waxbarashada, hoyga illaa dhamaadka daraasadda shahaadada koowaad, buugaagta iyo khidmadaha dhacdooyinka ah waxaana looga fadhiyaa oo keliya Jaamacadda Toronto.
Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaad noqotaa feker asal ah oo hal abuur leh oo u heellan iskuulka iyo bulshada, xamaasad ku saabsan barashada isla markaana hadda ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ee damacsan inuu bilaabo jaamacad sannad dugsiyeedka soo socda.
Abaalmarintani waxay ku saleysan tahay baahi iyo mudnaan, oo lagu abaal mariyey ardayda caalamiga ah ee shahaadada koowaad ee jaamacadeed leh heer sare ee tacliimeed, xirfadaha hoggaaminta, ka-qaybgalka arrimaha manhajka dheeriga ah iyo adeegga bulshada, iyo guusha la aqoonsan yahay ee meelaha kale ee muhiimka ah.
Abaalmarinta ayaa dib loo cusbooneysiin karaa seddex sano oo dheeri ah ama illaa dhamaadka daraasadda shahaadada koowaad ee jaamacadda haddii aad ku guuleysato heer jaamacadeed oo qanacsan oo ku saabsan kulliyaddaada oo aad sii wadato muujinta baahida dhaqaale.
Qiimaha abaalmarintu waa mid u dhiganta baahiyahaaga maaliyadeed taas oo lagu go'aamin doono iyadoo la soo koobayo khidmadaha waxbarashada, iyo kharashaadka nolosha iyo ka-goynta tabarucaada dhaqaale ee adiga iyo qoyskaagu sameyn kartaan sannad kasta.
Si aad ugu qalanto abaalmarinta, codsaduhu waa inuu ka galaa Jaamacadda British Columbia (UBC) machad la aqoonsan yahay oo uu codsanayo barnaamijkoodii ugu horreeyay ee shahaadada koowaad ee edeb kasta oo ka jira jaamacadda.
Abaalmarintan ayaa ah mid mudnaan iyo baahi ku saleysan, oo la siiyay ardayda caalamiga ah ee shahaadada jaamacadeed ka soo jeeda meelaha saboolka ah ama dagaalada ay aafeeyeen laakiin weli muujinaya heer sare oo tacliimeed xitaa iyada oo lagu jiro duruufaha adag oo kale waxayna u baahan yihiin kaalmo dhaqaale si ay u galaan jaamacad.
Abaalmarinta ayaa dabooli doonta khidmadaha wax lagu barto iyo kharashyada nolosha waana la cusbooneysiin doonaa illaa dhamaadka daraasadda shahaadada koowaad iyada oo la siinayo haddii aad ku guuleysato istaagida tacliimeed ee qanacsanaanta ee kulliyaddaada oo aad sii wadato muujinta baahida dhaqaale.
Si aad ugu qalanto, musharrixiinta waa inay codsadaan shahaadadooda koowaad ee shahaadada koowaad ee edbinta kasta ee Jaamacadda British Columbia, waa inay ka qalin jabiyaan ama ay dhowaan ka qalin jabiyaan (in ka badan hal sano) dugsi sare oo la aqoonsan yahay.
Tani waa abaalmarin ku saleysan abaalmarin la siiyay ardayga caalamiga ah ee shahaadada koowaad haysta oo leh rikoodh tacliimeed heer sare ah isla markaana galaya sanadka ugu horeeya barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda York.
Deeqda waxbarasho waa u qalantaa $ 17,000 sanadkiiba waana la cusboonaysiin karaa saddex sano oo dheeri ah haddii ardaygu ku haayo 7.80 miisaanka 9 dhibic York sanad dugsiyeed kasta ee jaamacadda.
Si aad xaq ugu yeelatid, waa inaad noqotaa arday caalami ah oo leh, dabcan, ruqsad waxbarasho oo Kanada ah oo aad codsaneyso markii ugu horreysay barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda ee York waana inaad bilowdaa arjigaaga oggolaanshaha intaad ku jirto sannadkaaga ugu dambeeya dugsiga sare ama sare in ka badan laba sano qalin-jabinta ka dib.
Musharrixiinta waa inay soo sharaxaan dugsigooda sare waana inay lahaadaan xirfado hoggaamineed ayna ku lug yeeshaan waxqabadyo manhajka ka baxsan.
Halkaas waxaad ku leedahay liistada sida loo helo deeqaha waxbarasho ee Kanada ee ardayda caalamiga ah, oo ay weheliso shuruudaha lagama maarmaanka ah iyo shuruudaha u-qalmitaanka.
Iyada oo loo marayo maalgalinta deeqaha waxbarasho, waxaad kuheleysaa waxbarashadii aad uqalantay oo aad wax ku darsato adoo wax uqabanaya adigoon ka walwalin dhaqaalaha aad hesho si aad si dhab ah ugu qaadatid waxbarashadaada oo aad ku gaarto hadafyadaada waxbarasho.
Maqaalkan ku saabsan sida loo helo deeqaha waxbarasho ee Kanada ee loogu talagalay ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba waxay sharraxeen faahfaahin kasta oo muhiim ah oo ku habboon markii la raadinayo codsi deeq waxbarasho, hadda kubaddu waxay ku jirtaa maxkamaddaada waxaadna tahay hal badhan oo guji si aad ugu raaxaysato waxbarashada Kanada.
Sida loo Codsado loona guuleysto deeqda waxbarasho ee 'Vanier Canada Graduate Scholarship'
13 Deeq waxbarasho oo dhammaystiran oo lagu bixiyo Kanada
25 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibadda wax ku barta
sida loo helo deeq waxbarasho ee Kanada
Previous Post:10 Kulliyadaha ugu raqiisan Toronto Canada ardayda Caalamiga ah
Post Next:9 Tilmaamaha Shaqeynta ee Codsiga Deeqaha Muusikada iyo Guul
Tarun wuxuu leeyahay,
May 4, 2021 at 10: am 07
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaad wax ku ool ah…
Yaasamiin Saifi wuxuu leeyahay,
April 22, 2021 at 3: 02 pm
Ku farax inaad ka mid noqoto bulshadaada Afghanistan.